တင်ဒါအသိပေးချက် - Irmak-Zonguldak လိုင်းKarabük-Zonguldak အကြားအဆင့်ဆင့်ဖြတ်ကျော်သည့်အခါမုန်တိုင်းရေနှင့်ရေမြောင်းလမ်းကြောင်းတည်ဆောက်ခြင်း | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာလေလံပွဲလေလံခဲပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: လုပ်ထားတဲ့Karabük-Zonguldak stormwater နှင့်ရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းများအကြားတန်းဖြတ်မှာ Irmak-Zonguldak လိုင်း
21 / 07 / 2017 လေလံခဲ, လေလံပွဲ, အထွေထွေ, Institute, ရထားလမ်းစနစ်များပြက္ခဒိန်, တူရကီ, TCDD, တည်ဆောက်နေလေလံ
ထားKarabük-Zonguldak stormwater နှင့်ရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းများအကြားတန်းဖြတ်မှာ Irmak-Zonguldak လိုင်း
STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)2တူရကီအထွေထွေဒါရိုက်တာသမ္မတနိုင်ငံ။ ဒေသန္တရရုံးကိုဝယ်ယူမှုများနှင့် Inventory CONTROL
ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အမှုကိုပြုခံရဖို့ stormwater နှင့်ရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းများမှာတွေ့ရှိအဆင့် Crossing အကြားတွင် Irmak-Karabük-Zonguldak Zonguldak လိုင်းပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 360951
ဂ) E-Mail ကလိပ်စာ:
87,94 အကြံအဖန်တွေချည်းရေနုတ်မြောင်းမီးဖိုထဲကလုပ်ခြင်း၏m³နှင့် (ကို C 30 / 37 အင်္ဂတေသည်အသင့်ဖြစ်ပြီလားရောနှောထားသောကွန်ကရစ်) နေရာယူ (စီမံကိန်းမှသင့်လျော်သောအဖြစ်), မိလ္လာနှင့် stormwater ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် 5920 ကီလိုဂရမ်; ကျဇယားသွန်းသံကင်နှင့်အခြားသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်း
ခ) Place: Zonguldak
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 03.08.2017 - 14: 30
ဝယ်ယူရေးအသိပေးချက် - Irmak-Zonguldak လိုင်းအကြားအဆင့်ဖြတ်ခြင်းKarabük-Çankırı…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Channel ကိုအဆိုပါအဆင့် Crossing built-in ပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Huzurkent အဆင့်ကိုဖြတ်အလုပ်၏ရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းများဖြစ်
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - မာလတီနှင့်Diyarbakırလိုင်းအကြားပြိုကွဲခြင်းအတွက်စာလုံးပေါင်းထိန်းထားသည့်နံရံ။
ဝယ်ယူရေးသတိပေးချက် - Osmaniye နှင့်Fevzipaşaဘူတာများအကြားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအမျိုးမျိုးသို့ရေနုတ်မြောင်း…
တစ်ဦးလေလံပြုလုပ်ခြင်း Kayal, ဦးချိုများနှင့် သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်းတက် Irmak-Zonguldak လိုင်း
တင်ဒါအသိပေးချက် - Irmak Zonguldak လိုင်း Km: ၂၉၃ + ၅၆၀ Level Crossing တွင်…
တင်ဒါကြေငြာချက် - Manisa Bandırmaလိုင်းကီလိုမီတာ - ၉၂ + ၆၀၀ မှ ၉၃၊ ၇၅ နှင့် ၃၂ ကြားရှိရေမြောင်းလမ်းကြောင်း။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အထိန်းထရံ Belemedik ဘူတာရုံဧရိယာနှင့်လုပ်ရေနုတ်မြောင်းလမ်းကြောင်းများ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Batman ဘူတာအဆောက်အအုံ, သဘာဝဓါတ်ငွေ့ကူးပြောင်းခြင်းစီးပွားရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် Hizmetev Yaptırılacaktır